Allu Arjun oo xili hore sii garaacay Ram Charan arin xiiso badan – Filimside.net
Allu Arjun oo xili hore sii garaacay Ram Charan arin xiiso badan
Inkastoo Allu Arjun iyo Ram Charan ka wada tirsan qoyska awooda badan ee Chiranjeevi hoos imaadaan hadana loolanka Tollywood waa mid furan.
Allu Arjun Boxoffice Telugu wuu ku xoogeestay madaama sanidihii ugu dambeeyay filimadiisa ganacsi 100 Crore sare u dhaafayeen ay sameenayeen halka Ram Charan dhawaanahan la daala dhacayo inuu Hit weyn sameeyo.
Allu Arjun filimkiisa Naa Peru Surya ee la daawan doono todobaadka ugu dambeeyo bisha April waa gobolka Nizam ee dhul weynaha Telugu ugu muhiimsan xuquuqdiisa qeybinta cajaladaha lagu iibsaday 20.40 Crore.
Waana lacagta lagu iibsaday filimada waa weyn sida Baahubali labadiisa qeybood iyo Srimanthudu, sidoo kale Allu Arjun wuxuu garaacay Chiranjeevi filimkiisii Khaidi No. 150 oo lagu iibsaday 19.50 Crore gobolka Nizam.
Dhinaca kale Ram Charan filimkiisa Rangasthalam oo la daawan doono 30 Maarso 2018 waxaa lagu iibsaday 18 Crore xuquuqdiisa qeybinta cajaladaha gobolka Nizam ee dhul weynaha Telugu ugu muhiimsan.
Waxaa Aqrisay 1,398